Mwakpo Megaways nyochaa (RTP: 96.3percent ) - cheapinternetsecuritysoftware.com
Ọ bụrụ na mmadụ nwere ike ịga njem na mbara igwe, onye kwuru d e ehi enweghị ike? Na Mwakpo Megaways, SG Gambling gosipụtara na ọbụna ehi nwere ike ịgba UFO ma lee ya anya na ya. Mwakpo Megaways juputara t Large Time Gaming Megaways motor nke na-agba 6 reels Id ahịrị 3. Nke a oghere nwere that a Sci-fi isiokwu na mmepe weere t a ehi ịgbakwunye ọchị t gameplay.
Reels: 6Rows: 3RTP: 96.3percent Min nzọ: Number 0.1Max nzọ: # 10Paylines: 1 MillionMax triumph: 250,000xVolatility: High Hapụ ụbọchị: June 15, 2021
Mwakpo Megaways oghere imewe
Mwakpo Megaways bụ egwuregwu na-atọ ụtọ na atụmatụ ya niile na isiokwu Sci-Fi nke gụnyere ehi. Ọ bụrụ na ị hụtụbeghị ehi na mbara, egwuregwu a ga-eme ka ị hụ otu! SG Digital only Mwakpo Megaways dị ka egwuregwu egwuregwu na-atọ ọchị nke igwe Bigways Game nke Big Time Game na-agba ọsọ.
Can not gaghị ahụ ihe osise eserese na-ewu ewu ebe a dị ka Rick na Morty mana SG Digitals jupụtara na akara ngosi mara mma. E nwere mbuso agha ndị ọbịa na nnabata ndị a na-emen’oge egwuregwu ahụ mana ha only nke ọma iji mee ka egwuregwu ahụ bụrụ ihe ọ funụ. Dabere na egwuregwu vidio that a ma amama Space Mwakpo, emere ụfọdụ mgbanwe eserese iji mee ka ọdịdị ya dịkwuo mma.
Yabụ, Mwakpo Megaways dị ka ụdị ọhụụ nke ihe nkiri ochie. Ya enwu gbaa anya na e only nke ọma na-enye na light-hearted beats mgbe un dị egwu soundtrack kwekọrọ na its visuals.
Ihe Mwakpo Megaways
A maara Megaways oghere maka nnukwu onyinye ha na ịkwụ ụgwọ na-akpali akpali. Na mwakpo Megaways’grid nwere 6 reels wont ahịrị 3, ihe dị obere ọpụrụiche mana ọ ka na-atọ ụtọ. Ga-ezute ụfọdụ kpochapụwo ọcha ebe a website ebe okporo ya atụmatụ.
Cascading Reels na-agbanye n’oge ọ bụla etolite ngwakọta mmeri. Igwe Megaways a ma ama na-ewepu akara niile etinyegoro na nchịkọta mmeri iji mee akara maka akara ngosi ọhụrụ. Ihe nnọchi anya mmeri na-agbawa un adorable akara ọhụụ nwere ike dochie anya ha ma mejupụta ọnọdụ niile enweghị ohere.
Ozugbo atụmatụ that a malitere, ngụkọta ụgwọ ịkwụ ụgwọ ọhụrụ na-esokwa. Ọ bụrụ na etolite ngwakọta mmeri ọhụrụ website t akara ngosi ọhụrụ na adị, ọzọ Cascading Reels ga-esochi. Ọ bụrụhaala na akara ngosi ọhụrụ pụtara inye aka na-emeri ụyọkọ ụyọkọ, ụdị Cascade ga-anọgide na-arụ ọrụ. Ozugbo ị dakọghị iche akara akara ọhụụ, Cascading Reels ga-akwụsị.
UFO Anyi Nhọrọ
N’elu igwefoto, ị ga-ahụ ahịrị akara yana ụfọdụ UFO. A na-akpọ nke that a UFO Wild Selector ebe UFO nwere ike ịgafe ma kwụsị d e akara ngosi ọ bụla ọ bụla. Ntughari ọ bụla na-eme ka UFO rụọ ọrụ ma họrọ zap 1 akara website Id ahịrị.
Ọ bụrụ na akara ahọpụtara pụtara na grid nke na-ekpuchi oghere niile d e agba abụọ, nke atọ, nke anọ, ma ọ bụ nke ise, akara a ga-agbanwe gaa Wild. N’otu oge ahụ, Cascading Reel ọzọ ga-eso dị ka anụ ọhịa ọhụrụ pụtara na ntanetị.
Ọ bụrụn’echiche maka ehi mgbe ị zutere atụmatụ a maka oge mbụ ị bụ eziokwu. Otú ọ dị, echiche nke ijikọta ehi na oghere bụ ihe dị njọ ma dị omimi. Mana na Mwakpo Megaways, ị ga – ahụ UFO ka ọ na – efegharị n’ofefe ebe ehi na – agba ya.
N’oge egwuregwu egwuregwu, njirimara that a nwere ike igosi mgbe ị na-agba ụta egwurugwu na-agba agba iji melite ikike ị nwere ịkụ nnukwu mmeri. Igwe niile na-egosipụta akara 7 ruo 10 na Megaways nwere ike ịbawanye website Id 168,070 ruo 1,000,000 ozugbo atụmatụ a kpatara.
Mwakpo Megaways nwere self gburugburu ị nwere ike rụọ ọrụ website Id ịre akara akara 5, 5, ma ọ bụ 6. Ihe nnọchianya ndị a nwere ike ịpụta ebe ọ bụla gburugburu iji rụọ ọrụ Bonus Spins. Iji ruo 15 Bonus Spins, ịkwesịrị ịnakọta akara ndị a gbasara:
4 Red Globe Scatter Symbols = 7 Bonus Spins5 Red Planet Scat Symbols = 10 Bonus Spins6 Red Globe Scatter Symbols = 15 Bonus Spins
Mgbe ọ bụla ị rutere akara ngosi ndị a gbasara ma nata Spins Spins, onyonyo nzụlite na-agbanwe website Id ụwa gaa na mbara ala ọzọ. Maka ego ọ bụla ị na-eme, ị ga-ahọrọ 1 nke akara 5 na-akwụ ụgwọ dị ukwuu miniature bụrụ akara anụ ọhịa. Ihe omuma that a nke ohia nwere ihe mmeghari puru iche nke dabere na akara ndi a:
Mwakpo Megaways Logo = ozugbo akara a ghọrọ Wild, nke a gbasaa iji kpuchie ya niile. Ihe akara a t abia na uru di elu karie ma guo ya dika otutu uzo uzo esi tinye ya na cluster.Scientist = Win Win Multiplier na uru nke malitere na 2x ga-etinye niile t mmeri niile emere. Maka mmeri ọ bụla ị meriri, ị ga – ahụ Win Multiplier okpukpu abụọ un bara uru. Ali = ma ọ bụrụ t a họpụtara Onye Ọbịa, akara a ga – eme ka igwe elu dị elu yana akụkụ un ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị nwere obi ụtọ, nke a nwedịrị ike ịbawanye mmeri gị ruo 1,000,000. Cow = akara Ehi niile nke na-adagharị na-agbanwe ga-abụ akara ọhịa na mgbakwunye 2x Multiplier. Yabụ, akara akara anụ ọhịa ndị a gụrụ dị ka twon’ụzọ mmeri .Ray Gun = ị ga-enweta 1x Multiplier maka Ray Gun ọ bụla na-egosi na wiil gị. Multiplier a na-adabere naanịn’oge isi self indulgent, ọ bụghịn’oge Cascading Reels.
Ngwunye self service ọ bụla ga-enye gị ihe mmezi dị iche iche ruo mgbe ngwụcha self love ga-agwụ. Maka ndị na-atụ anya inweta ọtụtụ self service Spins, Mwakpo Megaways na-enyekwa ndị na-agba mgba ohere.
Mwakpo Megaways RTP, ịkụ nzọ na onyinye
Mwakpo Megaways nwere 117,649 Megaways. Enwere akara ngosi two ruo 7 nke nwere ike ịpụta d e ọkpụkpụ ọ bụlan’oge egwuregwu egwuregwu. Na-ada ada that a na-emeri Nchikota, mkpa ka ị dakọtara dịkarịa ala 3 ma ọ bụ karịa akara ma ọ bụ Wild akara na ejikọta esi anwụde. A na-akwụ ụgwọ akara mmeri iji bido website Id agba 1. Ihe akara ugwo kachasị akwụ ụgwọ bụ akara Mwakpo Mwakpo nke na-akwụ 0.40 ka 8 maka ịbịakọ akara 3 Id 6.
Ihe nnọchianya ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ dị elu gụnyere Scientist, Alien, Cow, na Ray Gun nke na-akwụ 0.16 ruo 4. Ka ọ dị ugbu a, akara ngosi kachasị ụgwọ bụ akara Royals 9 – 10 nke na-akwụ 0.08 ruo 0.40 iji nweta akara ngosi 3 Id 6. Ugbu a, ịnwere ike ịgbaga na mbara igwe na ịkụ nzọ dị ọnụ ala nke sitere t # 0.25 ruo # 10.
Iji kpatụ self service nke nzọ gị, pịa pịa taabụ”+” ma ọ bụ”-“n’akụkụ aka nri nke esi anwụde. I tulee payouts, so I nwere ike imeghe paytable website Id ịpị”?” akara ngosi na aka ekpe nke esochi. Maka egwuregwu na-enweghị nsogbu, ị nwekwara ike ịtọsaa ọrụ Autoplay ebe ị nwere ike ime 100 Automobile Spins.
N’agbanyeghị nha nzọ ị chọrọ ịme, mara na Mwakpo Megaways bụ oghere na-agbanwe agbanwe. Ka ị na-egwuri egwu ma rụọ ọrụ Bonus Spins, mmeri gị nwere ike ịrị elu ruo 1,000,000 Megaways na 256x Multipliers. Mwakpo Megaways nwere RTP nke 96.30% na ihe ruru 25,000x ray ma ọ bụ,000 250,000 kacha jackpot na ntụgharị ọ bụla.
Kedu ihe bụ RTP t oghere Mwakpo Megaways? )
Mwakpo Megaways oghere nwere 96.3percent RTP dị ka ndabara.
Gịnị bụ volatility t Mwakpo Megaways?
Mwakpo Megaways bụ oghere dị egwu dị elu.
Kedu ndị na-eweta egwuregwu wepụtara Mwakpo Megaways? )
Mwakpo Megaways sitere na Scientific Games, nke dabere na USA. Otú ọ dị, egwuregwu ahụ dị maka ndị egwuregwu na UK na Europe.
Ebee ka igwu egwu Mwakpo Megaways
Ọ bụrụn’ịchọrọ igwu egwu Mwakpo Megaways, anyị na-akwado ụlọ ịgba chaa chaa dị elu kachasị elu:
Ọ bụrụ na enwere ụlọ ọrụ studio na-ewere ya nke ọma mgbe ọ bịaran’ihe ọhụụ mepụtara Megaways, ọ bụ SG Digital. Ndị otu that a na-eme ihe nzuzu ka ha pụtan’etiti ndị ọzọ miniature dọta uche ndị ahịa. Kemgbe ọtụtụ afọ, ụlọ ọrụ ahụ na-emeziwanye egwuregwu ya, na-anụcha ngwaahịa ọ bụla karịa ihe ndị ahịa na-atụ anya ya.
Ya only, Mwakpo Megaways bụ otun’ime egwuregwu un na-agba ọsọ ọsọ iji mee ka egwuregwu ahụ nwee ọ excitingụ. Bettingkụ nzọ dị iche iche nke egwuregwu a dị ntakịrị nke zuru oke maka ndị mbido d e ndị na-atụ ụjọ ịbanye nnukwu ego. Agbanyeghị, ụkpụrụ nke akara ya dịkwa ntakịrị. Yabụ, ịkwụ ụgwọ ahụ abụghị ihe ịtụnanya belụsọ ma ị mejupụtara atụmatụ ndị ahụ ma kụọ ụfọdụ njikọta mmeri.
Nkezi ogo: nyocha 1
Ọnwa Ise 31, 2021
from Ufo on Na-awakpo Megaways
SG egwuregwu stone!
Tags:Megaways Mwakpo nyochaa RTP
Ohere mepere kacha elu na akara akara
Oghere ndị dị na ntanetị taa dị ike karịa nke …